Deni iyo Qoor Qoor oo dhex-dhexaadinaya Farmaajo iyo Axmed Madoobe | KEYDMEDIA ONLINE
16 January 2022 Iclaamin: Bannaanbax ka mug culus midkii hore!
16 January 2022 Maxaa saaxiibbada Rooble beegsiga u gooni yeelay?
16 January 2022 Farmaajo iyo Fahad oo lagu eedeeyay weerarka Macalimuu
16 January 2022 Howlgalladii Danab oo hoos u dhac ku yimid
16 January 2022 Puntland oo cagaha galineysa colaad hor leh
16 January 2022 Qoondada siyaasadda haweenka oo walaac laga muujinayo
16 January 2022 Abaarta ka jirta DDS Itoobiya oo laga jawaabay
15 January 2022 Waa kuma gudoomiyaha cusub ee guddiga hirgalinta doorashada?
15 January 2022 Farmaajo oo dhaqaale ku bixinaya xaflado lagu taageerayo
15 January 2022 Dal dibadbax lagu qaban waayey doorasho xor ah maka dhici kartaa?
15 January 2022 FIET oo dooratay gudoomiye Xafiiska Rooble laga taageeray
15 January 2022 Tartan Farmaajo ku lug leeyahay oo ka socda Muqdisho
15 January 2022 Beesha Caalamka oo indhaha ku haysa madaxda Soomaaliya
15 January 2022 Maxey ka cabanayaan reer Waqooyiga ku sugan Muqdisho?
14 January 2022 Midawga Afrika oo ka hadlay doorashada Soomaaliya
14 January 2022 Maxey yihiin arrimaha keenay kacdoonka ka dhanka ah Farmaajo?
Deni iyo Qoor Qoor oo dhex-dhexaadinaya Farmaajo iyo Axmed Madoobe
Labada hogaamiye ayaa qaadanaya doorkii laga rabey Ra'iisul Wasaare Rooble, oo Muqdisho xitaa kula kulmi waayay Musharixiinta Mucaaradka ee diidan doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo dhigiisa Puntland Saciid Deni ayaa billaabey si wadajir ah u dhex dhexaadiyaan Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo xiriirkooda gaarey meeshii ugu xumayd.
Keydmedia Online ayaa heshay Macluumaad hoose oo sheegaya in Qoor Qoor uu kusii jeedo maalmaha soo socda magaaladda Garowe, oo Deni kula kulmi doono, iyadoo wararka ay intaasi ku darayaan in Axmed Madoobe ku biiri doono.
Deni ayaa khudbadii uu ka jeediyay Shirkii shalay ee Somalia Partnership Forum ka sheegay in loo baahan yahay kulan deg deg ah inay madaxda DF iyo Maamullada isaga yimaadaan khilaafaadka ka taagan doorashadda.
Farmaajo ayaan la ogeyn inuu aqbali doono in Ciidanka DF kasoo saaro Gedo, taasoo ah shuruudo ugu wayn Axmed Madoobe oo sheegay in aan doorasho lagu qaban doonin Jubbaland inta gobolka uu gacantiisa ka maqan yahay.
Sidoo kale, Farmaajo lama hubo inuu maamulka doorashadda Xildhibaanada ee lagu qabanayo Garbahaarey ku wareejin doono Axmed Madoobe, waana arrimaha ugu culus ee looga fadhiya Deni yoo Qoor Qoor inay xaliyaan.
Arinta Musharixiinta iyaduna waa budo gaar u tuman, oo xalkeeda muuqan, iyadoo Villa Somalia fulinayso qorshaheeda doorashadda, oo gudiyadda lagu muransan yahay ay howshooda qabsanayaan, iyagoo dhawaan soo saaraya jawdalka doorashadda Aqalka Sare.
0 Comments Topics: deni farmaajo qoor-qoor soomaaliya
Dhacdooyinka Todobaadka ee Soomaaliya
Warbixin 16 January 2022 15:30
Rooble iyo Farmaajo ayaa ka dhex-qarxay loolan cusub oo ku aadan soo celinta xiriirka Imaaraadka, waxaana amaro isku soo horjeeda ay siiyeen Gudoomiyaha Bangiga Dhexe, kala soco Macluumaad intaas dheer, Warbixinta Dhacdooyinka Todobaadka, ee Keydmedia Online.
Qarax Is-miidaamin ah oo gilgiley Muqdisho
Warar 16 January 2022 12:30
Amniga Muqdisho oo la isku haysto
Warar 15 January 2022 13:57
Jen Cabdalla: Farmaajo Soomaaliya Waxba uma reeban
Warar 15 January 2022 9:57
Qaraxa ayaa noqonaya midkii 2aad mudo ka yar Isbuuc ka dhacaya Caasimada dalka, iyadoo ay muuqato inuu amniga faraha dowladda ka baxay.
Fahad Yaasiin oo kulan qarsoodi ah la qaatey Guudlaawe
Saaxiib-tinnimadii Turkiga ma daneysibaa baddelay?
Copyright © 2022 Keydmedia | All rights reserved.